Somalia is enthusiastic about locking in when the COVID-19 pandemic reasons…
Within the highlight: Chadian opponent Yaya Dillo nonetheless
Al-Shabaab kills intelligence products and services in Somalia’s capital
Raysul Wasaaraha India oo laga tallaalay Covid-19! – Axadle
Wasiirka Caafimaadka XFS oo dalbatay in Xayiraadda lagu soo
Uganda oo Soomaaliya usoo diraysa Askar Howlgab ah! – Axadle
Maxay kawada hadlayaan RW Rooble & Golaha Midowga Musharixiinta?
Thomas Partey ayaa loo sheegay in muddo laba bilood ah uu ku badbaadin karo mustaqbalka xiddiga reer Germany ee Musut Ozil oo Arsenal ay ka reebtay liiska xiddigaheeda Premier League iyo Europa League.
Waa Maldini & Nesta Mar Kale Dhalatay! Labada tiir
Ciyaartoy ka careysan guushii PSG
Xiddiga reer Ghana ee Thomas Partey oo Arsenal ay maalintii ugu dambaysay suuqa iibka ciyaartoyda ee xagaagii ay £45 milyan oo Gini kagala soo wareegtay Atletico Madrid ayaa waxa uu Gunners saftay shan ciyaarood isagoo intii kalena ku maqnaa dhaawac.
Laakiin Partey waxa uu haddana furdaamin karaa dhibaatada haysata Mesut Ozil oo mustaqbalkiisa Emirates uu si qaab xumo ah ku dhamaanayo.
Halyeygii Arsenal ee Paul Merson oo laba horyaal iyo FA Cup kula guuleystay ayaa rumaysan in Thomas Partey uu door muhiim ah ka ciyaari karayo, isla markaana laba bilood oo kaliya isbeddel ugu samayn karo Mesut Ozil, waxaanu yidhi: “Waxay ila tahay, in Mesut Ozil uu dib ugu soo laaban karo kooxda haddii uu Thomas Partey taam noqdo.
“Partey wuxuu ku wareegaa garoonka, wuxuu qabsadaa khadka dhexe isagoo yeedhiya ciyaartu siday noqonayso. Haddii ay wada ciyaaran wuxuu u furayaa fursad Ozil.”
Xiddiga reer Germany ayaan kasoo muuqanin horyaalka Premier League iyo Europa League midkoodna isagoo aan loo ogolayn illaa laga gaadhayo February 2021 maadaama laga reebay liiska kooxda.
Arsenal ayaa dhinaceeda u dhibaatoonaysa, isla markaana rikoodhkeedii ugu xumaa muddo 39 sannadood ah loo diiwaangeliyey.
Dhibaatada ugu weyni waxay ka haysataa afka hore ee gool-dhalinta oo ay ciyaartoydu la’ yihiin cid kubadda gaadhsiisa kubadda, laakiin Paul Merson waxa uu rumaysan yahay in booska ay mushkiladdu ka jirto uu yahay halkii Ozil oo uu Mikel Arteta ka reebay.
“Waqtigan, cidina kubadda ma gaadhsiiso weeraryahannada. Maanta oo dhan waad ordi kartaa laakiin haddii aanay ciyaartooyo dhex-da hore ahi joogin, orodkaagu kaliya wuxuu u fiicnaanayaa ciyaartoyda kaa dambaysa.
“Marka ciyaartoydan Arsenal ay kubadda ka helaan khadka dhexe, isla waqtigaas, miyuu Pierre-Emerick Aubameyang ordayaa? Miyuu ku kalsoon yahay inay arki doonaan orodkiisa oo ay kubadda gaadhsiin karaan?
“Waxaan odhan karaa maya, sidaa darteed waxay u baahan yihiin kubbad-abuureyaal. Fernando Torres wuxuu ordi jiray marka uu Steven Gerrard kubadda qabto. Xataa ismay eegi jirin.”
axadle 8591 posts
More than 40 million people are trapped in modern-day slavery worldwide, the UN reports